Nivoady i Carrie Lam fa hitazona ny satan'i Hong Kong amin'ny maha-aviation, hub logistics azy
Ny Lehiben'ny Executive an'ny faritra administratif manokana ao Hong Kong (HKSAR) Carrie Lam dia nilaza fa ny alatsinainy dia manolo-tena hitazona ny satan'i Hong Kong ho ivon-toeram-piaramanidina iraisam-pirenena, ivon-dranomasina iraisampirenena ary ivon-tobim-pitaovana isam-paritra ny governemanta HKSAR. Lam nanao ny rema ...
American Airlines hamoaka mpiasa 25000 amin'ny volana oktobra
American Airlines hamoaka mpiasa 25000 amin'ny volana Oktobra American Airlines dia hamoaka fampandrenesana ho an'ny mpiasa 25,000 fa miatrika fangalarana tratrany amin'ny 1 Oktobra, hoy ny mpitantana roa voalohany ao amin'ny memo ho an'ny mpiasa Alarobia. Ny fanampiana federaly ho an'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, izay hongotana amin'ny 1 Oktobra, ...
Inona ny 3pl ary ahoana no fanatanterahana ny baiko?
Na tompon'orinasa e-varotra sy fidiram-bola ianao, rehefa manapa-kevitra ny hanomboka, ny fanatanterahana ny baiko dia ampahany lehibe amin'ny orinasanao. Rehefa mandroso ny asanao dia ho hitanao fa sarotra ny mitantana ny asan'ny filaminana amin'ny trano ary aleonao mandany fotoana bebe kokoa amin'ny ...